Compare Zimbabwe To Djibouti
Show the size of Djibouti compared to Zimbabwe Hide the map
If Djibouti were your home instead of Zimbabwe you would...
The GDP per capita in Djibouti is $2,700 while in Zimbabwe it is $600
Zimbabwe consumes 0.0588 gallons of oil per day per capita while Djibouti consumes 0.6468
The life expectancy at birth in Djibouti is 62.40 while in Zimbabwe it is 55.68.
be 89.08% more likely to die in infancy
The number of deaths of infants under one year old in a given year per 1,000 live births in Djibouti is 50.20 while in Zimbabwe it is 26.55.
be 36.84% less likely to be unemployed
Djibouti has an unemployment rate of 60.00% while Zimbabwe has 95.00%
The percentage of adults living with HIV/AIDS in Djibouti is 1.20% while in Zimbabwe it is 14.70%. 800 people in Djibouti and 39,500 people in Zimbabwe die from AIDS each year.
use 59.1% less electricity
The per capita consumption of electricity in Zimbabwe is 912kWh while in Djibouti it is 373kWh
be 56.55% less likely to be in prison
63 in every 100,000 people are currently imprisoned in Djibouti compared to 145 in Zimbabwe
experience 18.36% less of a class divide
The GINI index measures the degree of inequality in the distribution of family income. In Djibouti it is 40.90 while in Zimbabwe it is 50.10.
be 6.67% less likely to be murdered
7.00 in every 100,000 people are murdered annually in Djibouti compared to 7.50 in Zimbabwe
have 25.84% fewer babies
The annual number of births per 1,000 people in Djibouti is 24.08 while in Zimbabwe it is 32.47.